Via-in-suuf - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Iyadoo arrimuhu sii kordhaya ee miniaturization ah waxyaabaha elektarooniga ah iyo codsiyada ee qalabka garoonka dhigto, vias noqday mid aad u caan ah tan iyo markii ay yihiin xal wax ku ool ah ka masuul ah xiriir u dhexeeya korontada raad ka layers kala duwan ee guddiga circuit ku daabacan. Vias loo kala saari karaa saddex nooc oo waaweyn: Iyada-dalool Vias, Vias Blind iyo Vias aasay, kuwaasoo mid walba uu fulisaa sifooyinka iyo hawlaha kala duwan oo qayb ka qabadka guud isitcmaalo PCBs ama xitaa waxyaabaha elektarooniga ah.
Via-in-gashto (VIP) technology asal ahaan waxaa loola jeedaa technology by kaas oo via waxaa si toos ah kaalinta ay dureeri suuf ka kooban xiriir, gaar ahaan BGA suuf la baakadaha soo diyaariyeen garoonka dhigto. In si kale loo dhigo, technology VIP keenaysaa in vias plated ama qarsoon hoos suufka BGA, u baahan saaraha PCB in furaysto via la dumin kara ka hor fulinta dahaadhay naxaas on via ah si ay u aan la arki karin.
Marka la barbar dhigo vias indha la 'oo vias aasay, technology VIP qoreysa mudnaanta more:
• Fit for BGAs garoonka wanaagsan
• hoggaamiyay inuu cufnaanta sare ee PCBs iyo kor u qaadida keydinta meel
• Bandhigyada fiican in maamulka kaamerada, faa'iido u dhereg kulaylka
• caqabado kaga adkaatay naqshado-xawaaraha sare sida inductance hooseeyo
• Wadaagista dusha a flat la lifaaqa qayb
• Samaynta raadkoodii PCB yar oo dheeraad ah oo ka wanaagsan roonaadeen
Ugu wacan tahay kuwa Faa'iidooyinka technology VIP, via in loo gashto waxaa si balaadhan looga codsatay in PCBs yar-yar, gaar ahaan kuwa u baahan in meel bannaan oo xadidan BGAs iyo diiradda on kulaylka naqshado-xawaaraha sare wareejinta iyo. Sidaa darteed, in kasta oo indha la '/ vias aasay waxay faa'iido u hagaajinta cufnaanta iyo badbaado hantida maguurtada PCB, iyo tan iyo maamulka kulaylka iyo xubno ka design-xawaaraha sare ee ka walaacsanahay, via in suufka weli waa doorashada ugu fiican ee aad u. Iyada oo kharashka loo arkaa, mashaariicda kala duwan keeni qiimaha kala duwan. Sidaas darteed haddii vias waxaa ku lug leh mashruuca oo aad ku guuldareysato inay qaado nooca, nala soo xiriir dhex email wonderful@wonderfulpcb.com iyo shaqaalaha ku siin doonaa xal fiicnayn.